Abarhaneleka kudlwengulo nokubulawa kuka Sinoxolo bazakuvela kwinkundla ephakamileyo – Elitsha
Abarhaneleka kudlwengulo nokubulawa kuka Sinoxolo bazakuvela kwinkundla ephakamileyo
13th September 2016 Unathi TutaEdition 9 0 Xhosa
Abo bebeqhanqalaza ngaphandle kwenkundla ka mantyi yase Khayelitsha ngelixa lokuviwa kwebheyile. Photo: Mzi Velapi.
Bazakujamelana notshutshiso kwinkundla ephakamileyo yeli phondo le Ntshona Koloni, abarhanelwa kwityala lokudlwengulwa kubulawe intwazana yase Town Two.
Bazakuvela kwinkunda ephakamileyo yeliphondo le Ntshona Koloni abarhanelwa ababini kwityala lokudlwengula kubulawe intwazana eneminyaka elishumi elinesithoba ubudala. Inkundla kamantyi yase Khayelitsha ive ukuba uphando lugqityiwe kwaye ityala likulungele ukuba lingaxoxwa kwinkundla ephakamileyo ye phondo.
Amagqwetha abamangalelwa alunikiwe uxwebhu oluqulathe izimangalo ezityatyekwa aba bafana babini bangabazala,nekulindeleke ukuba baphekwe besophulwa ngazo kula nkundla iphakamileyo ukuqala kwinyanga e zayo. Nangona engaqinisekanga ukuba uzakuqhubeka emele aba bamangalelwa umnumzana Thabo Nogemana ulwamkele uxwebhu ze wanikwa ithuba lokuba aluqwalasele alungiselele ukuqala utshutshiso.
Umbutho olwela amalungelo oluntu iSocial Justice Coalition ithi ixolile ngendlela elihamba ngayo ngoku elityala. Othethela lombutho uNomthetho Kilo uthe “sixolile ngoku kuba siyabona ityala liqhubela phambili kuba sele lisiya kwinkundla ephakamileyo yephondo. Sizakuqhubekeka sixhasa usapho lakwa Mafevuka bade bagwetywe ababulali bomntwana wabo, sizakuqinisekisa ukuba ubulungisa buyenziwa.”
Oka Kilo uthi nangona bexolile yindlela eliqhubela phambili ngayo elityala, kodwa bathi bafuna zinciphe iziganeko zempatho gadalala kubantwana namanina. “Sifuna ukulwa ubundlobongela basemakhaya ingakumbi kumanina nabantwana, indawo zethu zokuhlala zibe zindawo ezikhuselekileyo. Ukuba ngaba zingasetyenziswa iziphakamiso zekomishoni yophando ngamapolisa kule lokishi ngekungekho bundlobongela bungaka.”
Abafana ababini abangabazala bathi babanjwa ebutsheni balo nyaka ngezityholo zokudlwengula babulale u Sinoxolo Mafevuka owayeneminyaka elishumi elinesithoba ubudala. Umzimba ka Mafevuka wafunyanwa kwigumbi langasese likawonke-wonke kwingingqi eyaziwa ngokuba yi Blowie ko SST eTown Two.
Also read: Umbutho olwelwa amalungelo abantu uthi icandelo lezindlu kufuneka liqwalasele umba wokonyuka kwerenti
Umbutho olwelwa amalungelo abantu uthi icandelo lezindlu kufuneka liqwalasele umba wokonyuka kwerenti
Umbutho olwelwa izindlu nendawo abantu abahlala kuzo uthi urhulumente kufuneka angenelele kwinto yokunyuka kwerenti